Xassan Sheekh, Sh Shariif iyo 50 Xildhibaano oo goor dhaw ka duulaya Muqdisho.
Warsidaha Puntlandtimes wuxuu ogaaday in aysan jiri karin is hor istaag maanta, maadaama ay Kismaayo tageen inta badan madaxdii laga celinayey oo uu ka mid yahay Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo goor dhaw ka dagaya.
Xasan sheeq iyo sheeq shariif ceebtiina ala ma asturo. Isma ceeb sadaan miyaa. Siiba sheeq shariif cagadii uu banaan ka ku aaday si uu ugu xajoodo. wagii maxakimta aya mel kutaal.